27 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 27 2013
အဆိုပါ 80 Usak ခုနှစ်တွင်နှစ်ပတ်လည်သစ်သား Wagon (ဗီဒီယို) ကိုမီးရှို့
27 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
အဆိုပါ 80 နှစ်ပတ်လည်သစ်သား Wagon အတွက်ပြည်နယ်များ၏ fixed ရက်စွဲ, မီးတောက်မီးရှို့ထားတဲ့ဗလာလှည်းမြေယာရထားခွဲဝေနှင့်အပိုင်းအစသို့လှဲချရှိရာဒေသအတွက်ဘတ္ Butler ကိုမီးရှို့ကြ၏။ ကောင်းစွာ 02.15, ဘတ္-Ulubey လမ်းအစွန်း, သမိုင်းဝင်မြေယာရထားမှာယနေ့ [ပို ... ]
RayHaber 27.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
(TÜLOMSAŞ) Lamar Angle က Round သံမဏိကိုယ်ရေးအမျိုးမျိုးသောရထားလမ်းစွဲစေစုဆောင်းရေးအလုပ် Ray ၏တူရကီလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ insulator တွင်လည်း, အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဝယ်ယူပါလိမ့်မည်ပြုလုပ်ခြင်း (TÜLOMSAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်Karagölဘူတာရုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဓာတ်လှေကားမှပိတ်ထား [ပို ... ]
traffic ဆိုင်းငံ့အကျပ်အတည်း: Bursa ဓါတ်ရထား T1 အချိန်ကြားကာလမိနစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်
traffic ဆိုင်းငံ့အကျပ်အတည်း: Bursa ဓါတ်ရထား T1 အချိန်ကြားကာလဟာလမ်းရထားမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြယ်ပွင့်မိနစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်ထွက်လာသည့်လမ်းရထားတစ်ချိန်ကအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကနဦးအသီးအသီး5မိနစ်အတွင်းဖြတ်သန်းဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 10 တိတ် Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကိုနီးပါး 2.5 ဘီလီယံကို TL သုံးစွဲထားပါတယ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 10 တိတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကြောင့်£ 2.5 ဘီလီယံသုံးစွဲမည်ကိုကြေညာခဲ့သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား မှလွဲ. Bursa ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပြည်နယ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် 10, 2.5 ဘီလီယံ Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahabettin Harput အကြောင်းကိုနေခဲ့ရသည်။ Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူး [ပို ... ]
အဆိုပါ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအလုပ် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ၏ရင်ပြင်
Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအလုပ်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအဆိုပါ 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည့်စုံ၏ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်အပိုင်း၏ဒုတိယအဆင့်တွင်ဘောင်ခတ်။ လိုင်း၏စိုက်ပျိုးမှုအလုပ်လုပ်သမ္မတနိုင်ငံနေ့အရှိန်ခဲ့သည်။ မျဉ်းအဆိုပါ Marmaray နှင့်အတူပေါင်းစည်းဥရောပ Gebze မှပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအပြီးသတ်သောအခါ [ပို ... ]
Keller ထိုင်ခုံကိုရပ်တန့် .. ! (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Keller ထိုင်ခုံကိုရပ်တန့် .. ! ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တွင်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား (YHT) မကျေနပ်မှုမြို့သူမြို့သားလူယူဆောင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆေးများတိုးပွားလာမှာရောက်နေပါတယ်။ D-42 100 ့မီတာကွာ5ကနေအိမ်မှာသူတို့ကိုဖြတ်တောက်ပင်လယ်ကွေ့ Izmit ၏ရပ်ကွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတွက် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Yildirim အော်စကာ
"အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Award ဆုများအတွက်မျှော်မှန်းချက်များနှင့်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပံ့ပိုးမှု" ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးYıldırımဂျီနီဗာနိုင်ငံတကာယူနီယံများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Yildirim အော်စကာပေးထားခဲ့သည်။ Geneva ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, 60 ။ [ပို ... ]
3 ။ မေလတွင်ယူခံရဖို့တံတား၏ 29 အခြေခံအုတ်မြစ် (ဗီဒီယို)
မေလ 29 တံတားအတွက်သိမ်းယူခံရဖို့တံတား၏အခြေခံအုတ်မြစ်၏အခြေခံ, 29 န်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်နှင့်သမ္မတ Gul ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူGaripçilerအတွက်ယူလိမ့်နိုင်ပါစေ။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, 2013 နှစ်တွင်ဧရာမစီမံကိန်းတစ်နှစ်အဖြစ်သမိုင်းတွင်အတွက်ဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ "ဒီအပတ်အတွင်း [ပို ... ]
အဘယ်သူသည် Takbir (ဗီဒီယို) နှုတ်ဆောင်သောတူရကီမြေအောက်ရထားမှာဘယ်သူကိုနမ်း
အချို့သောနမ်းမှာတူရကီမြေအောက်ရထားအချို့ Takbir နမ်းအရေးယူ '' ကျင့်ဝတ်အထွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ '' Ankaray ဘူတာရုံများတွင်ကောက်ယူသို့ဆောငျခဲ့ကွသငျလူငယျလိုခငျြဘူး, အုပ်စုရှေ့တော်၌ထိုဧရိယာသို့ရောက် လာ. , အဲဒီနောက်ရဲနှင့်စည်ပင်သာယာအရာရှိတွေရဲ့နိုင်ခြင်းကြားမှမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များရောက်ရှိခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များ [ပို ... ]
Lightning: အမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား expropriation နိုင်ငံသားများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ဆိုခနှောင့်အယှက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်
Lightning: အမြင့်မြန်နှုန်းရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ၏နိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာရန် expropriation နှောင့်အယှက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နိုင်ငံသားများနှင့်အစိုးရဝန်ထမ်းများအကြားဆက်ဆံရေးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ expropriation နှောင့်အယှက်မှသူကပြောပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim အစာရှောင်ခြင်း [ပို ... ]
Sincan CHP TCDD ဆန္ဒပြ
TCDD ထံမှ CHP "မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသိုလှောင်ရုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" လိုအပ် Sincan Sincan သကြားစက်ရုံပွညျ၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြခြင်း, CHP တူရကီပြည်နယ်မီးရထားဘူတာ Sincan Sincan ခရိုင်အဖွဲ့အစည်းကကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီရက်အတွင်းဘာသာရပ်, ပါလီမန်အစီအစဉ်ကအပြောင်းအရွေ့ [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB AG ကအလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်
တူရကီအရာအတွက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB AG ကအလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး TCDD နှင့် DB AG က (ဂျာမန်မီးရထား) လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး, 15 မေလ TCDD တူရကီ၌အာဗြဟံသံမဏိသမ္မတများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ 2013, DB AG ကနှင့် DB Schenker အာဏာပိုင်များအပေါ်ဝန်၏ဦးခေါင်းခဲ့ကြသည် [ပို ... ]
3 ။ တံတားသတ်မှတ်ချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ
တံတားအဝေးပြေး Cahit Turhan ၏သတ်မှတ်ချက်များညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြား၏အခြေခံအုတ်မြစ် 29 မေလ3ယူလိမ့် built လိမ့်မည်။ အဆိုပါတံတား, ကမ္ဘာပေါ်မှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြခဲ့သည်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံး။ အဝေးပြေး Cahit Turhan, AA ကိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် [ပို ... ]
torque Konyaspor ထောက်ခံသူတွေဟာ yht'y ဖြည့်
torque Konyaspor ထောက်ခံသူများနောက်ဆုံးပွဲစဉ်များတွင် Bucaspor Manisaspor Konyaspor torque ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်ပြီးနောက် yht'y ကစား-ချွတ်ဆီမီးဖိုင်နယ်ပြည့်ပရိသတ်တွေတစ်ဦးတည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာဘူး။ နံနက်အစောပိုင်းနာရီခန့်ကတည်းကအစိမ်းရောင်-အဖြူအသင်းရဲ့ထောက်ခံသူများဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့ Manisaspor Konya Atatürkကိုထောကျပံ့နိုင်ရန်အတွက် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Alınacaktırစေ့စေ့စပ်စပ် (TÜLOMSAŞ)
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က လေလံလေလံအပိုဒ် 1- ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ xnumx.idar ၏Alınacaktırနုနှင့်ပြဿနာများ RELATED ကိစ္စများစေ့စေ့စပ်စပ်; က) အမည်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က ခ) လိပ်စာ: Ahmet ကြက်မွေးမြူ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ Wagon ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (TÜLOMSAŞ)
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲအပိုဒ် 1.1- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာများအမျိုးမျိုးသော Wagon ပစ္စည်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအကြောင်းအရာ။ စာချုပ် Entity: တစ်) အမည်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ (တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးမျိုးသောချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက် welded-လွှာမှ (TÜLOMSAŞ)
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က အမျိုးမျိုးသောချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန် welded-စားသုံးမှုလေလံ AND SUBJECT ကိုတင်ဒါ Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ စာချုပ် Entity: တစ်) အမည်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ (တူရကီစက်ခေါင်း [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Alüminotermit ray အရင်းအမြစ် (ဘူတာအကြားလိုင်း Alayunt-Balikesir-ferrous Gökçedağမီးရထားလမ်း၌) ဖန်ဆင်းတော်ပါလိမ့်မည်
TCDD7။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုAlüminotermit ray အရင်းအမြစ်လေလံအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာများ SUBJECT ကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD7။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးဘေးကာကွယ်တားဆီးရေးဖွင့်လှစ်မီးရထားအစွန်းဖဲကြိုး (Demirciören ?? Nusrat ပြီးတော့Tavsanlı - စခန်းများအမျိုးမျိုးသောနေရာများအကြား Tuncbilek)
TCDD ။7။ မီးရထားလမ်းကြောဖွင့်လှစ်မီးဘေးကာကွယ်တားဆီးရေးအစွန်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု SERVICE ကိုဝယ်ယူရေးစာချုပ်လေလံအပိုဒ် 1 TO သို့ RELATED အကြောင်းအရာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတိကျတဲ့ဗြဲကိစ္စများသက်ရောက်စေ - 1.1 သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: သမ္မတနိုင်ငံ STATE [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု box ကိုစားသုံးမှု (အတပ်ဆင်ထားယူနစ်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ DMI DMI 15000 30000 နှင့်)
(ထိုတပ်ဆင်ထားယူနစ်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ DMI DMI315000 နှင့်) TCDD ဒေသခံထိန်းချုပ်မှု box ကိုxnumx.bölgစားသုံးမှု၏ညွှန်ကြားမှု Entity 30000 ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲအပိုဒ် 1- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာအကြောင်းအရာ။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; [ပို ... ]